Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့တပ်မတော် ထုတ် စစ်သေနတ်
chaung August 22, 2011 at 12:42 PM
MM August 22, 2011 at 3:20 PM
အဲဒီလို ဆိုးနေတာကိုကာ အားသားချက်ဖြစ်မလားဘဲဗျ ဟီးဟီး..။ကျွှန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာ..။
Mikey August 22, 2011 at 10:29 PM
sorry I can't read any of the things you're writing.
Do you have any vids of these weapons in action?
MM October 8, 2011 at 4:51 PM
Sorry friend i don't have vids of these gun.. :D
Arkar Naing October 12, 2011 at 9:02 AM
ဒီသေနတ် နှစ်မျိုးက လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး တပ်မတော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာ ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mass production ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
MM October 12, 2011 at 4:31 PM
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုရေ ဒီသေနတ်ကို ဘာလို့ မသုံးရတာလည်းဗျ မဆိုးဘူးလို့မြင်ပါတယ်...။နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလို ဒီဇိုင်းတွေ အတော်သုံးနေကြပြီလေ..။
ဟန်ကို ကို August 30, 2012 at 10:37 PM
ခု ထုတ်ထားတယ့် ဒီဇိုင်းတွေက လက်ရှိ တင်ထားတယ့် ပုံတွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်..... မှန်ဘီဘူး ဆိုဒ်တွေပါ ပါပါတယ်.... လက်ရှိ ပုံနဲ့ နည်းနည်း ဆင်တူတာကိုတော့ MAk-III လို့ ခေါ်တယ် ထင်တယ်..သေချာတာကတော့ MAK ဆိုတယ့် နာမည် တပ်ခေါ်ပါတယ်..ခု လက်ရှိတော့ အာဆီယံ သေနတ်ပြစ် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ သုံးပါတယ်..
sanaythar August 31, 2012 at 9:57 PM
ကျည်ကပ်ပြောင်းပြန်နဲ့ မှန်ဘီလူးဆိုဒ်နဲ့ အသစ်ထပ်ထုတ်နေတယ်လို့ ပြောတာပါလားခင်ဗျာ။ Sniper အတွက် သီးသန့်ထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းကြားမိတယ်။ သိရင်ပြောပြပေးပါ။